कहाँ गए दर्शक : किन चलेनन् गोपी, रणवीर र सय कडा दश ? | Nepali Outlook
कहाँ गए दर्शक : किन चलेनन् गोपी, रणवीर र सय कडा दश ? रारा अर्थात रानी हाई-कमान्डकाे परिचय खुल्दै गर्दा : दर्किएका दरारहरु ! Vegetarian Celebrities in Bollywood साली बलात्कार गर्ने भेना कालीमाटीबाट पक्राउ !
कहाँ गए दर्शक : किन चलेनन् गोपी, रणवीर र सय कडा दश ?
Published On: February 9, 2019 || 2075 माघ 26 शनिबार , at 2:24 PM
१८ गते शुक्रबार एकसाथ तीनवटा नेपाली चलचित्र गोपी, रणवीर तथा सय कडा दश प्रदर्शनमा आए । मेकिङका हिसाबले तीनवटै चलचित्रलाई उत्कृष्ट मानियो, प्रचार–प्रसारमा पनि यी तीन चलचित्रबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो भने माउथ पब्लिसिटी समेत प्रसस्त भयो । यद्यपि चलचित्रको सही मूल्यांकन सिनेमा हलमा हुन्छ । सिनेमा हलमा दर्शकको भीड जति बढी हुन्छ, त्यति नै उक्त चलचित्र सफल भएको मानिन्छ । यद्यपि यो साता प्रदर्शनमा आएका तीनवटै चलचित्रको व्यवसायिक पक्ष भने निराशाजनक छ ।
चलचित्र प्रदर्शन प्रारम्भ भएको तीन दिनपछि चलचित्र वितरक तथा जडिबुटीस्थित पुष्पाञ्जली सिनेमा हलका सञ्चालक गोपालकाजी कायस्थले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे– ‘हलमा दर्शक नभएर झिँगा धपाउँदै । हलमा दर्शक आउन फागुन १७ नै कुर्नु पर्ने भो– जय क्याप्टेन ।’ कायस्थको उक्त स्टाटस शुक्रबार प्रदर्शन भएका तीन चलचित्रप्रति लक्षित थियो । चलचित्र अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले पनि सिनेमा हलमा दर्शकको अभाव भएको आशयसहितको व्यंग्यात्मक स्टाटस लेखेका छन्– ‘दर्शक हराएको सूचना…’ । शुक्रबार प्रदर्शन भएका चलचित्र हेरेका दर्शकहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक नै छ भने समीक्षकहरूको मिश्रित । यद्यपि चलचित्रको व्यवसायिक पक्षले भने यी चलचित्रका लगानीकर्ताहरूको निद्रा गायब बनाएको छ ।
चित्रकोष योग्य मूल्यांकन चित्रपट हळूहळू आहे. सिनेमा हळू पाहुणा भेद जती बढी हुन्छ, त्यति नै उक्त चलचित्र यशस्वी भएको मानिन्छ. यद्यपि यो साता प्रदर्शनमा आइका थुवतीए चलचित्रको व्यावसायिक पक्ष भने निराशाजनक छ.
हाई-कमान्डकाे परिचय खुल्दै गर्दा : दर्किएका दरारहरु !
1 कहाँ गए दर्शक : किन चलेनन् गोपी, रणवीर र सय कडा दश ?
2 रारा अर्थात रानी
3 हाई-कमान्डकाे परिचय खुल्दै गर्दा : दर्किएका दरारहरु !
4 Vegetarian Celebrities in Bollywood
5 साली बलात्कार गर्ने भेना कालीमाटीबाट पक्राउ !
1 सुदुरलाई, सुन्दर बनाउने अभियान प्रवासबाटै थालनी गर्छाैं : भट्टराई